Madaxweynaha oo kulan gaar ah la qaatay ciidankii ku jiray xerada Gen. Gordan… – Hagaag.com
Madaxweynaha oo kulan gaar ah la qaatay ciidankii ku jiray xerada Gen. Gordan…
Posted on 25 Abriil 2018 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa shalay gelinkii dambe kulan gaar ah la qaatay Ciidanka ku jira xerada Gen. Gordan ee ku taalla degmada Hodan, kuwaasi oo uu tababaray Imaaraatka Carabta.
Kulanka dhinacyadan dhexmaray oo qaatay wax ka badan Saddex Saacadood ayaa waxa uu khuseeyay xiisadii maalmahan ka taagneyd xerada Gen. Gordan, gaar ahaan is rasaaaseyntii dhacday maalin kahor ee u dhaxeysay Ciidanka Imaaraatka uu tababaray iyo kuwa xoogga dalka.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa marka hore Ciidanka u sheegay inaanay jirin wax colaad oo dhexdooda ah, loona baahneyn in dib loogu laabto wixii dhacay, horeyna looga sii socdo.
“Marka hore waad mahadsan tihiin dhammaantiina, waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad ajiibtaan wicitaankeyga, wixii dhacay wayba dhaceen, mana ahan wax ku cusub Ciidanka, waxaan idin sheegaa in aysan jirin cid wax loo heyso, khasaare waxaa innagu filan intii ku dhimatay iska hor imaadka, mana dooneyno in sidaas oo kale ay dhacdo, waxaad sameyseen wixii ciidan looga baahnaa oo ah inaad is difaacdaan.” ayuu yiri Madaxweynaha.
“Anniga ayaa maanta ugu sareeya Soomaaliya, waxaan kaloo ahay Taliyaha ugu sareeya Ciidamada waxaan idin balan qaadayaa inaad bil walba heli doontaan xuquuqdiina, Ciidamada maqan gaarsiiya fariinteyda dib ha ugu soo laabtaan xerada, arrintan saraakiishiina ayaan kala hadli doonaan oo aan kula xisaabtami doonaa.” Ayuu mar kale yiri Farmaajo.
Xerada Gen. Gordan oo ammaankkeda guud ay la wareegeen Ciidanka DANAB ee ka tirsan Kummaandooska Soomaaliya ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay aanay jirin cid gudaha u galeysay ama ka baxeysay, balse hada dib ayaa looga qaaday xayiraada, waxaana soo laabanaya Ciidamadii ku kala firxaday iska hor imaadkii dhacay.